Inhloko ZeNdaba Mfumfu 26, 2020
IBulawayo isilamaviki athile ilokhu isengeza inani labantu asebulewe yiCovid 19 eZimbabwe, eselikhumakhulu edlula amabili-237. Sebezinkulungwane ezedlula ezithobaminwe mibili-8,276, asebetholakale belegcikwane leli elizweni.
Abafundi ababhala imihloliso ngomnyaka ozayo oform 5, oform 3 labo grade 6 baqale izifundo lamuhla kuhlandla lesibili lokuvulwa kwezikolo kodwa izikolo ezinengi azila babalisi ngoba lokhe beqhubeka bekhalala umsebenzi.
Amalunga awebandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change Alliance, atshengisele ehofisini yommeli weZimbabwe eGaborone lamuhla, lapho okukade kunanzwa ilanga elabekwa ngumanyano wamazwe angezansi kwezwekzi leAfrica lokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zenotho, eleSADC Anti-Santions Day.
Inhlanganiso yezisebenzi eye Zimbabwe Congress of Trade Unions - ZCTU ithi ukuvikeleka kwezisebenzi kwezempilakahle elizweni lokhu kungakafiki kubanga elidingakalayo, kubangelwa yikonokala komumo womnotho oselizweni okwamanje.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolosani Gwesela uthi ukuqala kwemidlalo ye Premier Soccer League kuzaphathisa kakhulu kumalungiselelo eqembu lama Warriors awokuya phatheka kumncintiswano we Chan..
Ku Livetalk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yiCovid 19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele kanye lokunanzwa kosuku olweAnti-Sanctions Day.